အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ် ၁၀ ခု ၄
အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ် 10 ခု
မေလ 20, 2022 Eze သဒ်ဒဲ
ဟုတ်တယ်! အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာ ကောလိပ်များ တည်ရှိပြီး လျှောက်ထားရန် သင့်တော်သူများကို ရှာဖွေရန် စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားများအတွက် ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် အကောင်းဆုံးများကို စုစည်းထားပါသည်။ အားကစားဆေးပညာအတွက် ဤကောလိပ်များသည် အဘယ်အရာက ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသနည်း။ သူတို့ရဲ့ ပညာရေးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်လား။ သိရှိရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
မကြာသေးမီအချိန်အထိ အားကစားဆေးပညာသည် ဆေး၏အကိုင်းအခက်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ မိသားစုဆေးပညာနှင့် ကလေးအထူးကုမှသည် ရောဂါဗေဒနှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းအထိ အခြားသူများအကြောင်း အမြဲသိနေပါသည်။ အားကစားဆေးပညာအကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းက ကျွန်ုပ်အား အံ့ဩစေခဲ့ပြီး ၎င်းအကြောင်းကို ဖတ်ရင်း၊ ၎င်းသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဆေးပညာနယ်ပယ်တစ်ခု ဖြစ်ပုံရသည်။
သင်ဟာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကို အမြဲစိတ်ဝင်စားပေမယ့် ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာကို ရှုပ်နေတယ်ဆိုရင် တခြားသူတွေနဲ့အတူ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အားကစားဆေးပညာလည်း ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများစာရင်းနှင့် ၎င်းတို့အတွက် လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးကျောင်းများ လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မွမ်းမံထားသော ပို့စ်စာရင်းပါရှိသည်။ US ရှိ ဆေးကျောင်း 50 နှင့် ၎င်းတို့၏ အထူးပြုဘာသာရပ်များ. ၎င်းသည် ဆေးကျောင်းနှင့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
အားကစား သမားတော် သို့မဟုတ် အားကစား ဆေးဝါး ဆရာဝန် ဖြစ်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခု မှာ သင်သည် အားကစား ကြယ်ပွင့်များနှင့် အလုပ် လုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာ ငါတို့သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Kevin Durant (သို့) Lionel Messi လိုမျိုး တစ်ယောက်ယောက်ကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းက သင့်ကို နာကျင်စေမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ လက်မှတ်ရဖို့အတွက် အရမ်းလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အားလုံးစိတ်မလှုပ်ရှားမီ အားကစားဆေးပညာသည် ဆေးပညာ၏ အကိုင်းအခက်ဖြစ်ပြီး ဆေးသင်တန်းသည် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ထိုလိုင်စင်ကို ရရှိရန် သင်သည် မြည်းကို အားထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဒါက ရယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားကစား ဆေးဝါးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ 6-8 နှစ်လောက် အချိန်ယူရပြီး အချိန်အကြာကြီး မလုပ်နိုင်ရင် စတင်ရှာဖွေပါ။ ကျောင်းစာအနည်းငယ်သာလိုအပ်သော လစာမြင့်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်များ.
အားကစားဆေးကျောင်းများ အပါအဝင် အထူးပြုကျောင်းများ အပါအဝင် ဆေးကျောင်းများ ဝင်ခွင့်ရဖို့ ခဲယဉ်းကြောင်း သာမာန်အသိတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မွမ်းမံထားသော ပို့စ်တစ်ခုရှိသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ အလွယ်ဆုံး ဆေးကျောင်းများ၎င်းတို့သည် ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျ၊ စသည်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
ပြီးတော့ ဆေးပညာ ဘယ်လောက် စျေးကြီးတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့ အားကစား ဆေးဝါး ကောလိပ်တွေက ကင်းလွတ်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ သင်ရှာနိုင်သည်။ ဩစတေးလျရှိ စျေးသက်သာသော ဆေးကျောင်းများ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ စိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ ပညာရေး၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာသင်ဆုများ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အားကစားဆေးပညာကို လေ့လာဖို့ သင်တစ်ယောက်ယောက်ကို ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကနေဒါတွင် ဆေးပညာကို အခမဲ့လေ့လာနည်း
Kinesiology နှင့် Sports Medicine အကြား ကွာခြားချက်များ
5. အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် ဆေးတက္ကသိုလ် ကောလိပ်
6. Boston တက္ကသိုလ်
7. South Florida တက္ကသိုလ် (USF)
8. Pittsburgh တက္ကသိုလ်
9. Logan တက္ကသိုလ်
အားကစားဆေးပညာကောလိပ်များ - FAQs
အားကစား ဆေးဝါး လစာက ဘယ်လောက်လဲ။
အားကစားဆေးပညာကို ဘယ်နှစ်နှစ်လောက် လေ့လာရမလဲ။
အားကစားဆေးပညာအတွက် ဘယ်ကောလိပ်က အကောင်းဆုံးလဲ။
အဆိုအရ ဝီကီပီးဒီးယားအားကစားဆေးပညာသည် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အားကစားနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပတ်သက်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ကုသခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ၏ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင်၏တာဝန်များတွင် အားကစားသမားများအား ၎င်းတို့၏ အားကစားလေ့ကျင့်မှုနှင့်အတူ ဒဏ်ရာများမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန် ကူညီပေးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရအားကစားသမားများ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အားကစားဒဏ်ရာများအတွက် ဆေးဝါးများ ညွှန်ကြားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ကြွက်သားအကြောအဆစ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အလွန်တက်ကြွသော လူနေမှုပုံစံအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အာဟာရဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များပေးခြင်းတို့ကိုလည်း တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အားကစားဆေးပညာဘွဲ့ကို လိုက်စားရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ထို့နောက် အားကစားဆေးပညာအတွက် ကောလိပ်များထဲမှ တစ်ခုသို့ လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော်လည်း ပထမဦးစွာ လိုအပ်ချက်များအကြောင်း လေ့လာပြီး ဝင်ခွင့်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ၎င်းတို့အား ကျေနပ်စေရန် လိုအပ်သည်။
အားကစားဆေးပညာအတွက် မတူညီတဲ့ကောလိပ်တွေရှိတာကြောင့် သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်း ကွဲပြားတာမို့ အောက်မှာ ယေဘူယျလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲ ပေးခဲ့ပါတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းပြီးပြီးသည်နှင့် အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ် သိပ္ပံဘာသာရပ်များကို သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးခန်းတစ်ခုတွင် သို့မဟုတ် သမားတော်နှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်အသိပညာ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံကို ရယူပါ။ ယူခြင်း။ အွန်လိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ သင့်လက်ခံနိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော အပေါင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အားကစားဆေးပညာကောလိပ်များထဲမှ တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် အဏုဇီဝဗေဒ သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒကဲ့သို့သော သိပ္ပံပရိုဂရမ်တစ်ခုတွင် ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့တစ်ခု ပြီးထားရပါမည်။
အနည်းဆုံး GPA 3.0 နှင့်အထက်ရှိရမည်။
သင်သည် MCAT သို့မဟုတ် GRE ကဲ့သို့သော စံပြုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ဖြေဆိုရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
တရားဝင် သို့မဟုတ် တရားဝင်မဟုတ်သော အထက်တန်းကျောင်းထောက်ခံစာများ၊ အထက်တန်းကျောင်း ဒီပလိုမာ သို့မဟုတ် GED ကဲ့သို့သော ၎င်း၏ တူညီသော အထောက်အထားများ။
ယခင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ မှတ်တမ်းများ
ဤလိုအပ်ချက်များသည် အခြေခံဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ၊ ပညာသင်နှစ်လိုအပ်ချက်များ အပြည့်အစုံရရှိရန် သင်နှစ်သက်သောကောလိပ်ကို ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူအတော်များများသည် kinesiology ကို အားကစားဆေးပညာနှင့် တူညီကြပြီး မကြာခဏ ရောထွေးကြသည်။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေကို ရှင်းအောင်ကူညီပေးပါရစေ။
Kinesiology သည် ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး အားကစားဆေးပညာသည် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အားကစားနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ဆက်စပ်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ကုသခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
လူအများစုဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရောထွေးနေတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မအံ့သြပါဘူး။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်၊ US သည် စာရင်းကို လွှမ်းမိုးထားသဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အားကစားဆေးပညာအတွက် ကောလိပ်ပေါင်း 150 ကျော်ရှိသည်။ ယခု ဤပို့စ်တစ်ခုတည်းတွင် အားကစားဆေးပညာအတွက် ဤကောလိပ် 150 အားလုံးကို ဆွေးနွေးရန် မဖြစ်နိုင်တော့သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖြိုခွဲခြင်း၊ အတွင်းကျကျ သုတေသနပြုလုပ်ပြီး အကောင်းဆုံးများကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤပို့စ်တွင် ရွေးချယ်ထားသော အားကစားအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များသည် ပညာရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပလပ်ဖောင်းများဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အားကစားဆေးပညာတွင် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အောင်မြင်မှုအချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည် အားကစားဆေးပညာအတွက် အခြားကောလိပ် 150 တို့မှ ထင်ရှားပေါ်လွင်စေပြီး လျှောက်ထားလိုသောကျောင်းသားများအတွက် လျှောက်ထားရန် စဉ်းစားရန် ဤနေရာတွင် ရွေးချယ်ထားသည်။
နောက်ထပ်မသဲကွဲဘဲ အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များမှာ-
အားကစားဆေးပညာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးအကောင်းဆုံးကောလိပ်စာရင်းတွင် မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မစ်ရှီဂန်၊ အန်းဆိပ်ကမ်းတွင် အများသူငှာ သုတေသန တက္ကသိုလ်အဖြစ် 1817 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တွင် အားကစားဆေးပညာအပါအဝင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် UM ဆေးကျောင်းရှိသည်။ UM ဆေးကျောင်းကို US News & World Report မှ အဆင့် 17 အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။th သုတေသနအတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆေးကျောင်းနှင့် မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုတွင် နံပါတ် 20 ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ ဆေးကျောင်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အားကစားဆေးပညာအပါအဝင် ဤကျောင်းတွင် ပေးဆောင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်တိုင်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုရှိသည်။ အားကစားဆေးပညာပရိုဂရမ်ရှိ ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းတွင်ရရှိနိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများမှ လက်တွေ့ကမ္ဘာမှ ကျွမ်းကျင်မှုအမြောက်အမြားကို သင်ယူခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထူးချွန်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိပါက သင့်ပညာရေးတစ်ခုလုံးကို ထောက်ပံ့ရန် ပညာသင်ဆုတစ်ခု ရနိုင်သည်။
American College of Sports Medicine သည် အားကစားဆေးပညာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးကောလိပ်များစာရင်းတွင်ရှိပြီး အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာပညာရေးကို လုံးလုံးလျားလျားအာရုံစိုက်ထားသည် - ၎င်းသည် အခြားသူများနှင့်မတူအောင် ပေါ်လွင်စေသည်။ Indianapolis၊ Indiana တွင် 1945 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အားကစားဆေးပညာတွင် အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဒီကျောင်းကို တခြားဘာတွေက ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်စေတာလဲ။
American College of Sports Medicine တွင် အဖွဲ့ဝင် 50,000 ကျော်ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း 90 မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အားကစားဆေးပညာနယ်ပယ်အတွင်း အလုပ်အကိုင် 70 ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏ 360 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လည်းဂုဏ်ယူပါသည်။
ကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းသိပ္ပံနှင့် အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာ ပညာပေးနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်လာစေရန်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆေးပညာအတွက် အားကစားအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် တတိယမှာ Los Angeles ရှိ Southern California တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ဤတက္ကသိုလ်သည် လေ့လာမှုနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကွဲပြားပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော ပရိုဂရမ်ကမ်းလှမ်းမှုများကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမှန်တကယ်ရေပန်းစားပြီး ထိပ်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို 1880 ခုနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိက သုတေသနတက္ကသိုလ်အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်သည် အထူးပြုအမျိုးမျိုးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Keck ဆေးကျောင်းကို တည်ရှိသည်။ ဤဆေးကျောင်းတွင် US News & World Report မှ US News & World Report အရ US တွင် ထိပ်တန်း5ယောက်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Bio-kinesiology and Physical Therapy ဟုခေါ်သော ဌာနခွဲတစ်ခုလည်း ရှိသည်။
၎င်းသည် အားကစားသိပ္ပံတွင် သိပ္ပံပညာမဟာဘွဲ့ကို ပေးဆောင်သည့် ဇီဝရုပ်ခန္ဓာဗေဒနှင့် ကာယကုထုံးဌာနခွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါပရိုဂရမ်သည် ကျောင်းသားများအား အားကစားနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထူးပြုနယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်ရန် လိုအပ်သော အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ကျောင်းသားများအား ပေးဆောင်စေပြီး လှုပ်ရှားမှု၏ ဇီဝကမ္မ၊ ဇီဝစက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ အခြေခံများကို ခိုင်မာစွာ နားလည်စေပါသည်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်သည် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် ကြီးမားသောနာမည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရာနှင့်ချီသောဆုများရရှိထားကာ အောင်မြင်မှုများရရှိကာ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုအခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကို ဘွဲ့ရရှိထားသည်။ Stanford တွင် ဖောင်းပွမှုများစွာရှိပြီး ၎င်းသည် အဆိုပါ hypes များနှင့် ကိုက်ညီပြီး၊ ၎င်း၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းချက်သည် အဘယ်သူမျှမလိုက်ဘဲ၊ ၎င်းကို ကျယ်ပြန့်သော လေ့လာမှုနယ်ပယ်နှင့် အရည်အချင်းများအတွက် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
စတန်းဖို့ဒ်တွင် အားကစားဆေးပညာလေ့လာခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသောဌာန အပြည့်အစုံရှိသည်။ အဆိုပါဌာနတွင် ကာယစောင့်ရှောက်မှု၊ အားကစားလေ့ကျင့်မှု၊ လူသားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကာယလေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ ပါဝင်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်နေရာများနှင့် ခက်ခဲသောဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကြောင့် ဤနေရာတွင် အားကစားဆေးပညာပရိုဂရမ်သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ohio State University College of Medicine သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တွင်ရှိသော အားကစားအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပညာရေးနှင့် သုတေသနနှစ်ခုလုံးတွင် US News & World Report မှ တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုထားပြီး ၎င်း၏မူလတန်းသင်ကြားရေးဆေးရုံနှစ်ရုံသည် မတူညီသော အထူးပြု 10 မျိုးတွင် US ရှိ အကောင်းဆုံးဆေးရုံများကြားတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
၎င်းသည် Ohio State University College of Medicine ၏ထူးခြားမှုဖြစ်ပြီး အားကစားဆေးပညာအတွက် အခြားကောလိပ် 150 တွင် ထင်ရှားသည်။
ဤနေရာတွင် အားကစားဆေးပညာအစီအစဉ်တွင် အရိုးကုသနည်းများ၊ အရေးပေါ်ဆေးပညာ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာနှင့် အတွင်းပိုင်းဆေးပညာအပါအဝင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနများ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပရိုဂရမ်သည် လူနာများအား ကုသရန် ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုရန် သင့်အား လက်ဆင့်ကမ်း အတွေ့အကြုံများ ပေးဆောင်ပေးပါသည်။
ဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်သည် အကောင်းဆုံး အားကစားဆေးပညာ ပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော့စတွန်မြို့တွင် 1839 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂလိက သုတေသနတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ဆေးကျောင်းများ၏ အဆင့်များအတွက် Boston University သည် သုတေသနအတွက် နံပါတ် 32 နှင့် မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် နံပါတ် 36 ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ အားကစားဆိုင်ရာ ဆေးဝါးအစီအစဉ်ကို ကာယကုထုံးနှင့် အားကစားလေ့ကျင့်ရေးဌာနမှ ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ပရိုဂရမ် ကမ်းလှမ်းမှု အမျိုးအစားအားလုံးကို ရှာဖွေရန် ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး သင့်နှင့် ပိုကိုက်ညီမည့် အမျိုးအစားကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အားကစားဆေးပညာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကောလိပ်များစာရင်းတွင် နောက်တစ်ခုမှာ South Florida တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 1956 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောပြည်သူ့သုတေသနတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအားကစားဆေးပညာအပါအဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာဒီဂရီပရိုဂရမ်များစွာကိုပေးဆောင်သည်။ ယခု၊ ဤကျောင်းသည် အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များကြားတွင် အဘယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းရသနည်း။
ပထမဦးစွာ USF သည် ထိပ်တန်းအမေရိကန်တက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဆေးကျောင်း – Morsani College of Medicine – သည် US ရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံးဆေးကျောင်း 50 တွင်ရှိသည်။ ၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်သည် အားကစားဆေးပညာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသားများအား အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အရိုးနှင့် အားကစားဆိုင်ရာ ဆေးပညာဌာနကို တည်ရှိသည်။
University of Pittsburgh တွင်၊ သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး အားကစားဆေးပညာဘွဲ့ အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုကို သင်ယူနိုင်ပါသည်။ အားကစားဆေးပညာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် တက္ကသိုလ်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သိပ္ပံကျောင်းသည် ထိပ်တန်းဆေးကျောင်း6ခုတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ခံထားရပြီး ၎င်းသည် အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာစေသည့် အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကျောင်းအောက်ရှိ အားကစားဆေးနှင့် အာဟာရဌာနသည် အားကစားလေ့ကျင့်ရေးတွင် ပုံမှန်မာစတာနှင့် အရှိန်မြှင့်မာစတာလမ်းကြောင်းတစ်ခု၊ အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာ MS၊ အားကစားသိပ္ပံတွင် MS၊ Ph.D တို့ကို ပေးဆောင်ထားသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသိပ္ပံတွင်၊ အာဟာရသိပ္ပံတွင် BS နှင့် အာဟာရပညာရှင်အစီအစဉ်ရှိ အမြန် MS နှင့် ပုံမှန် MS များ။
သင့်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော မည်သည့်ပရိုဂရမ်မဆို သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Logan တက္ကသိုလ်သည် ၎င်း၏နောက်ခံကြောင့် အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်လာသောအခါ 2013 အထိ Chiropractic ၏ Logan College ဖြစ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်သည် အားကစားဆေးပညာနှင့် အားကစားသိပ္ပံတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်အတွက် ကျောင်းသားများကို ပြင်ဆင်နေသည့် အရည်အသွေးမီ chiropractic ပညာရေးအတွက် အမြဲလူသိများသည်။
အားကစားနယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်ရန် ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံ၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အားကစားသိပ္ပံနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တွင် သိပ္ပံပညာ မဟာသိပ္ပံကို ပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အစီအစဉ်ကို 100% အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းသည်။
အားကစားဆေးပညာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးစာရင်းတွင် အကောင်းဆုံးကောလိပ်များမှာ အိုင်ဒါဟို၊ Caldwell တွင်ရှိသော ကိုယ်ပိုင်လစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်ငယ်ဖြစ်သည့် Idaho ကောလိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို 1891 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Rhode ၏ ပညာတော်သင်7ဦး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး3ဦးနှင့် NFL ကစားသမား4ဦးတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ကောလိပ်တွင် အားကစားသိပ္ပံကို လေ့လာရန် ရည်ရွယ်ထားသော ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားစွမ်းဆောင်ရည်ဌာနတစ်ခုရှိပြီး ကျောင်းသားများအား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အားကစားတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန် ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ဤပရိုဂရမ်ရှိ ကျောင်းသားများသည် ပါမောက္ခများနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးပေးမည့် အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိရန် လက်ဖြင့် သင်ယူခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်း သုတေသနပြုခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ကြသည်။
ဤသည်မှာ အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ် ၁၀ ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် သင်တန်းကြေးများအကြောင်း လေ့လာရန် ဝင်ခွင့်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အားကစားသမားတစ်ဦး၏လစာသည် $209,000 မှ $311,000 အထိရှိသည်။
အားကစားဆေးပညာကို ပြီးမြောက်ရန် အချိန်ပြည့် လေ့လာမှု ၄-၆ နှစ် ကြာသည်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်သည် အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ်ဖြစ်သည်။
အာဖရိကတိုက်ရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် ၅ ခု
ဂျာမနီရှိဆေးပညာကိုလေ့လာရန်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခု
နယူးယောက်ရှိ အကောင်းဆုံး ဆေးကျောင်းများစာရင်း
အွန်လိုင်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော အခမဲ့ ဆေးပညာစာအုပ် 15 အုပ်
ကျွန်ုပ်၏ အခြားဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။
Thaddaeus သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ5နှစ်ကျော်ရှိသော SAN တွင် ဦးဆောင်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ သူသည် ယခင်က Blockchain ပရောဂျက်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဆောင်းပါးများစွာကို ရေးသားခဲ့ပြီး မကြာသေးမီကပင် 2020 ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖန်တီးရာတွင် ပိုမိုတက်ကြွလာခဲ့သည်။
သူ စာမရေးဖြစ်တဲ့အခါ anime ကြည့်တာ၊ အရသာရှိတဲ့ ထမင်းချက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးတာ သေချာပါတယ်။
ကနေဒါရှိ အကောင်းဆုံး ဂီတကျောင်း ၈ ခု
စင်ကာပူရှိ အကောင်းဆုံး ဂီတကျောင်း ၁၁ ကျောင်း
လက်မှတ်ပါသော ထိပ်တန်းအခမဲ့အွန်လိုင်း MBA သင်တန်း ၁၂ ခု
နော်ဝေတွင် MBA ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ။
Previous post:နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် 10 ခု | သင်တန်းကြေးများနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ
Next Post:ကလေး သူနာပြုဆရာမ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။